Ihe Nleta Blogger nke ndi ọbịa | Martech Zone
Companieslọ ọrụ SEO na-anwale ma na-ejigharị nsonaazụ ọchụchọ… naanị na ọ gaghị akwụsị. Matt Cutts nke Google dere nnukwu post, Ihe ire ere na ọdịda blọgụ ndị ọbịa maka SEO na-agụnye vidiyo na nkwụsi ike ya na ịde blọgụ ndị ọbịa na Matt na-enye nke a dị ka akara ya:
Naanị m chọrọ igosi na ụyọkọ nke ala ma ọ bụ saịtị spam abanyela na "ịde blọgụ ọbịa" dị ka atụmatụ njikọ njikọ ha, anyị na-ahụ ọtụtụ mgbalị spammy iji mee blọgụ ndị ọbịa. N'ihi nke a, aga m akwado nkwenye (ma ọ bụ opekata mpe ike) mgbe mmadụ ruru ma nye gị edemede blog ọbịa.
Anyị na nso nso ọpụpụ ọbịa blogger ebe a Martech Zone. Onye edemede ahụ bịakwutere anyị na-ekwu na ọ chọrọ ịmatakwu ndị ọzọ na ụlọ ọrụ ahịa ma na-atụ anya ide ụfọdụ isiokwu miri emi maka anyị. Anyị nyere ya ohere ma ọ dee ederede izizi.
Enwere m obi abụọ. The post nwere a ole na ole nke njikọ n'ime ọdịnaya… ole na ole bụ pụtara ọnyà ma otu bụ kpọmkwem na m bụ nchegbu. Anyị na-etinyeworị njikọ ndị na - enweghị njikọ na ọdịnaya ọpụpụ, mana enweghị m ike ịma jijiji na eziokwu ahụ abụghị ọdịnaya ezubere oke… na njikọ ndị ezubere iche. Abụọ ọzọ isiokwu na-ede akwụkwọ na m nwere na-amalite ime ụfọdụ nnyocha.
Enyochare m profaịlụ Twitter ya, profaịlụ Facebook, profaịlụ Google+ na isiokwu ndị ọzọ na ntanetị. Onye nke ọ bụla adịchaghị oke… enweghị mkparịta ụka onwe onye, ​​enweghị ndị enyi, yana ajuju ajuju ebe o siri bido ma ọ bụ bizi ugbu a. O yiri ka ọ bụ akụkọ ifo n'agbanyeghị nchịkọta nke isiokwu ya na ịntanetị. N’ezie, ejighi m n’aka na ọ bụ onye nnochi aha ziri ezi.
Akpatre utịp edi nte ke mma mbụp enye n̄wed unyịme esie. O dere ma kwuo na obi adịghị ya mma ịnye ọtụtụ ozi nzuzo ahụ. Achọghị m maka ozi nkeonwe… ọ gaara ekpuchi adreesị ụlọ ya yana data nkeonwe ọ bụla. Naanị ihe m chọrọ bụ ka a mata onye m bụ. Na nke ahụ, ewepụrụ m njikọ niile site na ozi ya wee gbanwee nzere nbanye ya.
Ya mere,… si ebe a gaa, ebe a bụ ndepụta m:
Nzuzo njirimara - blọọgụ a bụ ikike m n'ịntanetị ma achọrọ m ịnọgide na-ekpughere, ịkwanyere ugwu na ịdị mma iji debe ma na-eto eto m. Agaghị m etinye ya na ụfọdụ backlinker.
Usoro ojiji - anyị na-ahụ na ndị ode akwụkwọ anyị niile maara ihe mgbaru ọsọ nke blọọgụ anyị - na-enye ndị na-ere ahịa nghọta ka igwe na teknụzụ nwere ike isi metụta mbọ ahịa ha. Ọ bụghị ire ma ọ bụ backlink! A ga-ewepụ ọdịnaya ndị ọzọ ọ bụla ma chụpụ onye dere ya.
Ọrụ ndị nkwado - ndị ode akwụkwọ anyị niile ga - ebido site na ịbụ ndị na - enye aka… nke pụtara na ha nwere ike ide ọdịnaya mana ha enweghị ike bipụta ya n'onwe ha. Anyị ga-enyocha ma bipụta akụkọ ha ruo mgbe obi dị anyị mma na ha ghọtara ihe ha na-eme.
Ngosipụta zuru oke - ọ bụrụ na enwere mmekọrịta ịkwụ ụgwọ n’etiti anyị, onye dere ọdịnaya, yana akụ enyere na post - a ga-ekpughere ndị na - agụ ya mmekọrịta ahụ. Anyị anaghị eche banyere ịnye ọdịnaya gbasara ndị na-akwado anyị ma ọ bụ ngwaahịa na ọrụ anyị nwere mmekọ maka… mana ndị na-ege anyị ntị ga-amarịrị na enwere mmekọrịta ebe ahụ.
Nofollow - njikọ niile a ga - eme n’ogige ozi ndị ọbịa. Enweghị mwepu. Ihe mgbaru ọsọ gị kwesịrị ịbụ iji nweta ma kpughee ya na ndị na-ege anyị ntị sara mbara ma soro - ọ bụghị backlinking maka SEO. Ka anyị debe ihe ndị anyị na-ebute ụzọ.
Egosipụtara Images - ọdịnaya ọ bụla ọhụụ ga-enye ikikere. Ọ bụrụ na onye na - ede blọgụ anyị enweghị ozi, anyị ga - eji nke anyị foto ngwaahịa na ihe onwunwe vidiyo. Agaghị m enweta ụgwọ ịpụnara sitere na ọrụ foto ngwaahịa n'ihi na onye na-ede blọgụ ọbịa jidere ihe oyiyi site na nchọta onyonyo Google.
Ọdịiche Pụrụ Iche - anyị anaghị etinye ọdịnaya sitere na isi mmalite ndị ọzọ. Ihe niile anyị na-ede bụ ihe pụrụ iche. Ọbụlagodi mgbe anyị na-ekekọrịta ihe osise, ọ na-esonyere ya na isiokwu pụrụ iche nke ndị na-ege anyị ntị.
Kedu ihe ndị ọzọ ị na-eme iji hụ na usoro ịde blọgụ ndị ọbịa na blọọgụ gị na-enyere aka ma ghara imebi aha na ikike gị n'ịntanetị na ọchụchọ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya?
Tags: backlink atụmatụbacklinksadịgborojaonye ọbịa bloggerA
Acquia: Gịnị bụ Ahịa Data Platform?
Mar 26, 2014 na 3: 10 AM
Nnukwu ọrụ Douglas, ọ bụ ọmarịcha ọkwa gbasara ihe ndị na-ede blọgụ a na-eme na ntanetị ndị ọbịa. Amaghị m ihe kpatara na ịgaghị elekwasị anya na ntuziaka ndị a tupu ịnye gị akwụkwọ ozi ọbịa na blọọgụ gị. Anyị niile maara na ntuziaka ndị a bụ iwu na anyị niile kwesịrị ịgbaso tupu ikwe ka onye ọ bụla dee blog ọbịa na blog gị.